कब्जियतको समस्याले हैरान हुनुहुन्छ ? यसरी समाधान गर्न सकिन्छ | Hamro Doctor News
By डा. दिनेश राई
कब्जियत भनेको जो कोहीलाई पनि हुन सक्छ । झन् अहिले कोरोना महामारीको समयमा सबै जना घरमै बस्ने हुँदा विभिन्न परिकार बनाउने, चिल्लो, पिरो, मसालादार खानाहरुको सेवन गर्ने जस्ता बानीले पनि कब्जियतको समस्या निम्तिन सक्छ ।
त्यसो त कब्जियत आफैमा कुनै रोग होइन । यो विभिन्न रोगका लक्षण हुन सक्छ । पाचन प्रणालीमा आउने समस्या नै कब्जियत हो ।
कब्जियतकै कारणले विभिन्न रोग निम्त्याउने पनि सक्छ । तर, खानपान र जीवनशैलीमा ध्यान दिने हो भने कब्जियतको समस्याबाट टाढै रहन सकिन्छ ।
कब्जियत हुने कारण
आन्द्रमा अत्याधिक पानी सोसिँदा पनि कब्जियत हुन्छ । यस्तै आन्द्राको चल्ने गति नै कम हुँदा पनि कब्जियतको समस्या हुन्छ ।
खाना खाने समय बेमेल हुँदा पनि कब्जियत हुनसक्छ । हरेक दिन एकै समयमा मिलाएर खानु राम्रो हुन्छ ।
नियमित व्यायाम नगर्ने व्यक्तिमा पनि कब्जियतको समस्या हुन्छ । मानसिक रुपमा तनाव र चिन्ता लिने व्यक्ति पनि कब्जियतको सिकार बनेको पाइन्छ ।
तनावले पाचक्रियामा असर पुर्याएर गराउँछ ।
कतिपय व्यक्तिले दिसा लाग्दा पनि ट्वाइलेट नजाने तथा दिसा गर्ने नियमति बानी नबसेका हुन्छन् । दिसा निष्काशन हुने इच्छालाइ दबाउँदा पनि कब्जियत हुन्छ ।
खानपान र जीवनशैली व्यवस्थित बनाए कब्जियतको समस्या आउनै सक्दैन भने समस्याको समाधान गर्न पनि सकिन्छ । नियमति व्यायाम गर्नु पहिलो जिम्मेवारी हुनेछ । व्यायामले आन्द्राको गतिविधि बढाउने र मांसपेशी क्रियाशिल राख्ने काम गर्छ। विभिन्न खालका योग पनि कब्जियतका रोगीलाइ उपयोगी हुन्छन् ।
बिहान खाली पेटमा घिउकुमारीको पातको गुदी २० ग्राम सेवन गर्नाले पनि कब्जियतमा फाइदा गर्छ ।
प्रत्येक दिन फाइबरयुक्त खाना २०–३५ ग्राम सेवन गरेमा दिसालाइ नरम बाउन मद्धत गर्छ । चोक्कर, आटा, ब्राउन राइस, जौ, गेडागुडी अन्न, छोकडा, किसमिस, ओखर, बदामजस्ता फल सबै किसिमका फलफूल तथा हरियो तरकारी र सागपातमा फाइबरको मात्रा बढी हुन्छ ।
Last modified on 2021-07-22 10:55:50